Midka Koowaad ee Jamaica: Jakes Hotel wuxuu gaadhay 100% Tallaal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Midka Koowaad ee Jamaica: Jakes Hotel wuxuu gaadhay 100% Tallaal
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Jakes Hotel ee Jamaica
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica, Mudane Edmund Bartlett wuxuu ku amaanayaa dhismaha caanka ah ee loo dalxiis tago ee Xeebta Koonfureed, Jakes Hotel iyo Jack Sprat, marka la gaaro in boqolkiiba boqol shaqaaluhu qaataan labada qiyaasood ee tallaalka COVID-100.
Jakes Hotel waa tii ugu horreysay oo kaliya ee laga aasaasay Jamaica illaa iyo hadda taas oo lagu dhammaystiray hindisaha tallaalka dalxiiska.
Dalxiisku wuxuu ku jiraa dib-u-soo-noqoshada adduunka oo socotada ayaa raadinaya meelaha COVID-nabdoon ee waayo-aragnimadooda safarka.
Xarumo kale oo ku yaal Xeebta Koofureed oo ka qayb qaadanaya hindisaha tallaalka ayaa la sheegay inay yihiin heer u dhexeeya 40 ilaa 70 boqolkiiba.
Iyagu waa aasaasayaashii ugu horreeyay oo keliya ee Jamaica illaa iyo hadda ku dhammaystay arrintan iyada oo hoos timaada hindisaha tallaalka dalxiiska ee Wasaaradda Dalxiiska iyo Huteelka Jamaica iyo Ururka Dalxiiska oo la shaqeeya Hindisaha Tallaalka Waaxda Gaarka ah.
Isagoo bogaadinaya Jakes iyo shaqaalaheeda, Wasiir Bartlett wuxuu yiri, “Waxaan ku ammaanayaa Jakes sida uu u dhigay xawaaraha waddada si loo tallaalo dhammaan shaqaalaha dalxiiska. Dalxiiska dalxiiska waxay ku jirtaa dib-u-soo-noqoshada adduunka oo socotada ayaa raadinaya meelaha COVID-nabdoon ee waayo-aragnimadooda safarka. Haddii aan rabno inaan helno soo laabashada ugu badan shaqaalaha dalxiiska waa inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay inay naftooda ilaashadaan, dadka la shaqeeya, qoysaskooda iyo booqdayaashayaga iyagoo qaadanaya tallaalka nafaha lagu badbaadiyo. ”
Xarumo kale oo ku yaal Xeebta Koofureed oo ka qayb qaadanaya hindisaha tallaalka ayaa la sheegay inay yihiin heerar u dhexeeya 40 ilaa 70 boqolkiiba, badiyaa leh laba tallaal oo hore.
Isagoo iftiiminaya guulaha “Qoyska Jakes”, Jason Henzell, Guddoomiyaha Jakes Hotel, Villas & Spa wuxuu yiri: “Waxaan ku faraxsanahay shaqaalaheena 125 qof oo gaaray guushan. Jakes wuxuu ku dadaalaa inuu noqdo wakiilka wanaagsan ee dalxiiska bulshada, isagoo og in caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaheena iyo martidayada, iyo sidoo kale bulshada ballaaran ee Treasure Beach, iyo run ahaantii Jamaica iyo guud ahaan adduunka, ay muhiimad weyn noo leeyihiin meel loo tamashle tago. ”
Isagoo la xiriira sida loo fuliyay, Mr. Henzell wuxuu yiri waa iyadoo la sameynayo “wax kasta oo ay qaadato oo lagula kulmo meel kasta” ay dareemaan raaxo. “Waxaan waqti badan la qaadanaynay shaqaalaheena marka la eego sidii loo bari lahaa taariikhda tallaalka gudaha Jamaica iyo waxtarka mid kasta oo ka mid ah tallaalada COVID-19. Waxaan u diyaarinay inay la kulmaan dhakhaatiir, u samaysanno ballanno, u diyaarinno gaadiid iyo xitaa inaan ka soo qaadno guryahooda, qaarkood waxay ku jiraan baabuurkayga, ”ayuu shaaca ka qaaday.
Mr. Henzell ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la isu naxariisto, maadaama dadka ceebta ahi ay u adeegi lahayd oo kaliya inay iska riixdo. Waxa uu ku faraxsanaa in qaadashada hab daryeel, faham leh ay shaqaysay, isaga oo raaciyay: “Aad baannu ugu hanweynahay waxaanan u malayneynaa in ay wax weyn u tarayso ganacsiga safarka.”
Marka laga hadlayo dadaalka qaran ee lagu doonayo in la tallaalo shaqaalaha dalxiiska, Mr. Henzell wuxuu yiri: “Wax badan ayaa hoos u dhacaya in la aamino, oo aan lagu degdegin hannaanka oo la siiyo sabab kasta oo ay dareemaan cabsi.” Wuxuu raaciyay: “Haddii aan raacno dhammaan baaritaannada iyo dhammaan tirakoobyada la daabacay, noqoshada tallaalku waxay ku siinaysaa heer aad u sarreeya oo ah inaad ka gudubto maalmaha xun ee COVID haddii aad qaaddo cudurka, marka waxaan aad u soo jeedinayaa inaad tixgeliso tallaalka oo xitaa dhakhtarkaaga kala hadal midka ku habboon adiga. ”